Exodus 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Mose ne Israelfo too nkonim dwom (1-19)
Miriam gyee dwom no so (20, 21)
Ɔmaa nsu a ɛyɛ nwene yɛɛ dɛ (22-27)
15 Saa bere no, Mose ne Israelfo too dwom yi de kamfoo Yehowa sɛ:+ “Mɛto dwom ama Yehowa, efisɛ n’anuonyam ayɛ kɛse.+ Ɔpɔnkɔ ne nea ɔte no so nyinaa, waka wɔn agu ɛpo mu.+ 2 Yah* ne m’ahoɔden ne me tumi, efisɛ ɔno ne me nkwagye.+ Me Nyankopɔn ni, meyi no ayɛ;+ Onyankopɔn a me papa som no no ni,+ mɛkamfo no.+ 3 Yehowa yɛ ɔko mu ɔkatakyi.+ Ne din ne Yehowa.+ 4 Farao nteaseɛnam ne n’asraafodɔm nyinaa, waka wɔn agu ɛpo mu,+ N’akofo a wɔyɛ akatakyi paa no amem wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no mu.+ 5 Nsu no bu faa wɔn so; wɔkɔɔ ase tɔnn te sɛ ɔbo.+ 6 O Yehowa, tumi ahyɛ wo nsa nifa ma;+ O Yehowa, wo nsa nifa bubu atamfo. 7 W’anuonyam kɛse mu na wode wɔn a wɔsɔre tia wo no hwe fam;+ Wosoma w’abufuhyew, na ɛhyew wɔn sɛ sare. 8 Mframa a efi wo hwene mu kaa nsu boaa ano; Egyinae dinn, na nsu a ayiri no ammu amfa so; Nsu a ɛrebu fa so no yɛɛ te sɛ nsukyenee wɔ ɛpo no mfinimfini. 9 Ɔtamfo no kae sɛ: ‘Metiw wɔn; mɛto wɔn! Mɛkyɛ wɔn ho nneɛma kosi sɛ me koma bɛtɔ me yam!* Mɛtwe me sekan! Me nsa bedi wɔn so nkonim!’+ 10 Wuhuw mframa, na ɛpo kataa wɔn so;+ Wɔkɔɔ ase tɔnn te sɛ dade a emu yɛ duru* wɔ nsu kɛse mu. 11 O Yehowa, anyame no mu hena na ɔte sɛ wo?+ Hena na ɔte sɛ wo, wo a wo kronkronyɛ nni ano?+ Wo na ɛsɛ sɛ wosuro wo na wɔde nnwom yi wo ayɛ; wo na woyɛ anwonwade.+ 12 Woteɛɛ wo nsa nifa, na asaase menee wɔn.+ 13 Wo dɔ a enni huammɔ nti, wudii ɔman a woagye wɔn no anim;+ Wode wo tumi bɛkyerɛ wɔn kwan akɔ wo tenabea kronkron hɔ. 14 Nkurɔfo bɛte+ na wɔabɔ hu;Filistifo ho bɛyeraw wɔn paa.* 15 Saa bere no, ehu bɛka Edom abusua mpanyimfo;Moab atumfo* ho bɛpopo.+ Na Kaanan nyinaa koma betu.+ 16 Ehu bɛma wɔn ho awosow biribiribiri.+ Wo basa kɛse no nti wɔrenkeka wɔn ho; wɔbɛyɛ te sɛ ɔboKosi sɛ wo, Yehowa, wo man betwam,Kosi sɛ ɔman a woanya wɔn no+ betwam akɔ.+ 17 Wode wɔn bɛba na woabedua wɔn wo bepɔw so,+ w’agyapade so,Faako a wo, Yehowa, woasiesie sɛ wobɛtena,Tenabea kronkron a wo, Yehowa, wode wo nsa ayɛ no. 18 Yehowa bedi hene daa daa.+ 19 Bere a Farao apɔnkɔ, ne nteaseɛnam, ne ne nkurɔfo a wɔtete apɔnkɔ so no kɔɔ ɛpo no mu no,+Yehowa maa ɛpo no bɛkataa wɔn so,+Nanso Israelfo no de, wɔfaa asaase kesee so wɔ ɛpo no mfinimfini.”+ 20 Ɛnna odiyifobea Miriam a ɔyɛ Aaron nua no faa mpintin kurae, na mmea no nyinaa de mpintin ne asaw dii n’akyi. 21 Na Miriam gyee mmarima no so sɛ: “Monto dwom mma Yehowa, efisɛ n’anuonyam ayɛ kɛse.+ Ɔpɔnkɔ ne nea ɔte no so nyinaa, waka wɔn agu ɛpo mu.”+ 22 Akyiri yi, Mose dii Israelfo no anim ma wofii Ɛpo Kɔkɔɔ no ho kɔɔ Sur sare so, na wotwaa kwan nnansa wɔ sare no so, nanso wɔannya nsu. 23 Wobeduu Mara,*+ nanso na ɛhɔ nsu no yɛ nwene, enti wɔantumi annom. Ɛno nti na ɔfrɛɛ hɔ Mara no. 24 Ɛnna nkurɔfo no fii ase nwiinwii tiaa Mose sɛ:+ “Dɛn na yɛbɛnom?” 25 Enti osu frɛɛ Yehowa,+ na Yehowa kyerɛɛ no dua bi. Bere a ɔde too nsu no mu no, ɛyɛɛ dɛ. Ɛhɔ na Onyankopɔn maa wɔn ahyɛde ne atemmusɛm, na ɛhɔ na ɔsɔɔ wɔn hwɛe.+ 26 Ɔkae sɛ: “Sɛ wowɛn w’aso tie Yehowa wo Nyankopɔn na woyɛ nea ɛteɛ wɔ n’ani so, na wutie ne mmara, na wudi n’ahyɛde nyinaa so a,+ nyarewa a mede baa Egyptfo so no, meremfa emu biara mma wo so,+ efisɛ me Yehowa na meresa wo yare.”+ 27 Ɛno akyi no, wobeduu Elim, na na asuti 12 ne mmedua 70 wɔ hɔ. Enti wɔsoɛɛ nsu no ho.
^ Anaa “me kra koma bɛtɔ ne yam.”
^ Anaa “te sɛ sumpii.”
^ Nt., “Awo yaw beso Filistifo mu denneennen.”
^ Anaa “atumfo atirimɔdenfo.”